WARAYSI: Xiisad ka Taagan Qorshe Puntland ugu soo Rartay Kaantaroolkii Garoowe dhinaca Gobolka Sool | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
WARAYSI: Xiisad ka Taagan Qorshe Puntland ugu soo Rartay Kaantaroolkii Garoowe dhinaca Gobolka Sool
Jul 14, 2019 - 53 Aragtiyood
Laascaanod ( Kalshaale ) Maamulka gobolka nugaal ee puntland ayaa u soo raray kontaroolkii magaalada Garoowe deegaanka bixin ee degmada boocame gobolka sool sida ay xaqiijiyeen odayaasha deegaanka bixin.
Amarka raritaanka kontaroolka Garoowe ee loo rarayo deegaanka bixin ee Gobolka Sool, ayaa la sheegay inuu Bixiyey wasiirka maamliyada puntland iyadoo qorshuhu yahay in la fidiyo magaalada Garoowe .
Arintan ayaa waxay keentay Xiisad markale halkaasi kasoo Cusboontay, Iyadoona ay is horfiyaan Ciidan ay leeyihiin dadka deegaanka iyo Kuwa maamulka.
Oday Maxamuud Muuse oo kamid ah Odayaasha deegaanka ayaa ka hadlay Siday wax udhaceen, wuxuuna sheegay in Xadkii Gobolada Sool iyo Nugaal loosoo raray dhinaca gobolka Sool
“Meesha hada shaqaaqo ayaa ka taagan, Dadkaasi waxay wadaan deegaan iyo Dhul Boob, Ciidamo iyo waxgarad ka socda dhinaca Boocame iyo kuwii Puntland ayaa halkaasi isku horfadhiya, waa daldoon iyo deegaan doon waxay wataan Xeer ay Qorteen, Balse lama Aqbali doono Deegaamayn Cusub”. Ayuu yidhi Maxamuud Muuse.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 53)
Wasiirka maaliyadu shaqadaas ma leh . Golaha deegaanka ee Degmada Garoowe baa leh iyo wasiirka Arimaha Gudaha .
Nugaal iyo Sool isku dad baa Degan , waana la xalinaya wax weyn ma aha .
Cadowgeenu waa snm uun , Kooxda somaliyadiidka ah
Idoor Liqe, “Bal horta TUF haku margane KAF” (KAF=FAFTAN). Adeer day waxaa tiri; “Cadowgeenu waa snm uun”. °Cadaw waa kii aadan waxba isu reeban, Ma halkaasay kaa joogta mise XURGUF baa idinka dhexaysa?
Dhulloos waa yaqaan in Xuduudka Qarankoodu 7 km u jiro Garoowe
Innaga Ilaaliya Nimanka,Qarankuna wuxu idiin soo diri Ciidan Ku ruqaansada Yoocada
Wadaniyiin Dalkooda iyo dhulkiisa usoo jeeda.
Zaki adeer, maanta waa maalinti Kaftanke, GARAWE waxay ka midtahay Jamhuuriyadda Somali ee Haddaa tabato HALKEED geyn wiilasha Tooxtooxan ee Raxanweyn oo gurmadka?. WBT
Waar anbagu Garoowe uma Soconno ee Dadka Ha bajin.
Ma Xarakada ayaad Sheegi?
PL ma afgaranaysaa Dadkaan hal kelmad ka fahmi waayay maraan Qaar TV ka hadlaya aan dhegta u taagay!!!
Shacabka puntland dhulka waa wada leeyihiin Lkn deegaameyn ma jirto .
Kontaroolka inta aan la qaadin meesha loo rarayo dadka deegaanka wax ka go’aan waa in lagala tashadaa si aan isfahan daro meesha uga iman.
Ninyahow Garoowaba waxay u dalxiis Tagaan dooxada Bixin ee gobolka Sool ee puntland .
Ayaan dhaweyd Reer Garoowe ah baan dhahay maalmahan kuma arag Xagee jirtay , kute Bixin baan dalxiis u aaday. Kkkkkkkk anigiiba yaabay .
Dangoroyo, Garmaal iyo Eyl dalxiis ma leh miyaa kkkkkkk
Gabadh reer Garoowe ah
Sanadkii hore mar aan ku baashalayey dooxada Bixin ila eega . Nissan patrol baan watay
idoor liqe aka ceerigaabo khaatumo
beenta nagadaa waa markaan orajiray dadko dhami waa xaga dhimirka
beeniraad maleh dhelalow runhamodinaa
Waa qorshe kale oo ay rabaan in lagu qabsado BIXIN sidii Koontoroolkii Tukoraq loola wareegey,
Xoolo aruursi kale oo loogu magac darey xoreeyntii Bixin ayaa ii muuqdo.
* Biyo/daad inteysan ku soo gaarin ayaa la iska moosaa.
hana denbaajine naga aamus odayohow aan meeshanba karawihin
markaan sogaloba wuu fadhiya mashaqayste
Dhulbahante waa yaqaana xuduuda inay yoocada tahay kkkkkkkkkkkkkkk
ilko jajab adiga maxa yoocada kagalay ma hooyadaba ku dhashay
Oo soow sidii Custom kii TUKARAQ ku ruqaansan mayno isagana, ma cidbaa naga hor istaagi karta.
#AARIBOOWE WAA ARGAGAXNAY!!
SUCUUDIGA oo qasab ku dajiyay markabkii xoolahaa ka qaaday marsada BERBERA.
Wuxu ku qasbanaaday inuu waraaqda Waasaradaa Caafimaadka Ee Somaliland ogolaado kuna rogo xoolahaa ka yimid Berbera Port,Somaliland.
Guul & Gobanimo Somaliland!
WAXAAN malayn inuu Farmaajo Xayyiraaddi ka qaaday SAA waa Waddani Aan ogolayn in beel Somalia dhibaato soo gaarte XITAA hadday tahay tan Kaligi Taliye Muuse Biixi. °Waddani oo dhan baa saa lagu yaqaan SAA waa kii AUNTE Maxamed Ibraahim Cigaalba dhihi jiray; “Badeecaddaan haloo wareejiyo Puntland Halkaasa ka daran Somalilande. WBT
SOmalilander sxb anaa shalay dadka usheegay anigu hada waxaan joogaa riyaad caasimada sucuudiga waliba adhi kale ayaa lasoo rarayaa diintu siyaasad magasho
Dhukbahantuhu waa ruwaayad markay majeerteenka iskacelinayaan xuduudeenu waa yoocada ayay yidhaahdaan marna waxay ku adhan xuduud gumaystihii sameeyay majirto kkkkkkk
11 sano ka hor iyo maanta isu fiiri. Laascanood.
Qaran mise qabiil.
Sucuudigu MA diidi karo xoolaha berbera.
Waayoo haduu diido xoolaha berbera wexey ka dhigan tahay sucuudiga. Oo ka quustay. Xoolihii somalida.
Islaanta ceelbuur. Baydhaba joogto iyo midda saylac joogto xoolohooda wexey ka dhofaan berbera.
Mr farmaajo. Oo ku hungoobay codsigii sucuudiga ee ahaa in aan xoolaha berbera la iibsan.
Garqaad adeer, siyaasadda dhex bood LAAKIIN DIINTA ha uga bixin GOORMU farmaajo codsaday; “…in aan xoolaha berbera la iibsan?. WBT
Garqaad waa sidaa sxb haduu diido somali oo dhan buu kamaarmay ayay kadhigan tahay sababtoo ah xoolaha ugu badan waxay layimadaan waa somali oo dhan ilaa itobiya halka ugu dhowna waa Barbara
Aarka, adna ma sasaan dhallaan baad yeelatay, saaxib wax iskula har. WBT
Farmaajo boqol jeer ayuu hungoobay lacagtii qadhaanka UN ta adhigii anagana midnimo iyo cashar ayay noo tahay isna qasaaro
Awoowe. Yaan naloo qaban farmaajo dadkoo dhanbaa ku hungoobay. Walaalnimadu waa halkedii.
Heshiiskii 3 gesoodka ahaa ee jabuuti ku dhexmaray. Madaxweyne xasan sheekh. Geelle iyo madaxweyne silaanyo. Waa inoo halkisii. 14 bilood ayaa u haray. Siyaasiyiinta cuqdadeysan.
Awoowe Nimanka ma Canshuurtii baad ka joojiseen waa kuwan Xoolaha Berbera ka dhoofa jaqafadda la hoos ordayee?
Kusoo rida,yaa alla wax siiyay bay wadaanee!!
Kollay busaarad baa Ku habsatay baan filayaa
Awoowe qolyahan diyaasbaro wexey qalad ka fahmeen aqoonsiga calanka buluuga.
Wexey u haystaan aduunku in uu hargeysa ku qasbi karo in ay xamar tagaan ayagoo gurguuranaayo.
Wexeysan xisaabka ku darsan hargeysa in ay ku imaan karto isfahan hadal oo labada dhinac ah.
Waxaa kaloo jiro madaxweynuhu maaha leader ship qof go.aan leh. Oo qiimeyn karo go.aanada qaar Waxa ka imaan karo. Hadba kii wax u sheego ayuu Iska racaa wuxuu u sheego madaama uusan aheyn qof leader ah oo kala garan karo. Xaaladuhu halkeey tagi karaan.
Reer Muqdisho wax badan ayey fahmeen. Hadda xaalku sidii hore maaha.
Wexey ogadeen madaxweyne farmaajo in uusan xitaa kismaayo tegi Karin. Taliye ciidan uusan u magacaabi karin.
Kursi masloxo lagu qaasay iga dheh.
Garqaad adeer, BAL horta dadnimo yeelo oo ka Bax sheegashada Beel aadan ahayn HANA ceebayn Beel weynta ISAAQ ee ku faan. WBT
Puntland oyo jegaanta. Ma federaalka kaxorayn doona waayaab gobalka sool wuxuu noqday barakacayaal. Iska hadla kontroo bay maraysa. Tukaraq sool buuhoodle ma waxay noqdaan dad madax aan isu talinkarin waxaan arkay ay Masxwye khatumo oo Arab ladhiraya barysaya. Oo leh musa naga la hadla. Dastuurka snm noo fura wuxuu kadhigay dastuurka wax iyaga dastuurka masamsyn karaan miyaa warqado la qoro.
Waxaan arjey mid Jabhada SNM ah oo ku booteyn Tukoraq iyo Boocame wuxuu Baabuurku u socdaa 20 daqiiqo, meeshaas miyaa Kontorool kale lageyn karaa.
Intaan yaabey ayaan dhahey aniga Garowe ayaa ii darane oo difaac iga rabtee (Meeqaa loo kala socdaa Boocame iyo Garowe ) kuye HAL SAAC. Naxdin Garowe waxey noqotey Furin
-Niman dib haloo celiyo
Wan gartay sxb..mahadsanid!
Axmed somali. Wcs
Adeer salaan sare.
Mahaan isaaq ku sheegtay isoo cadeey?
War bal adne dhulmahaante ka bax. Oo xagaa iyo hiraan nooga soo hadal.
Anigu waxaan ka hadlaa aragti dhexdhexaad ah marka ay timaad woqooyi iyo koofur.
Aniga warkaan ma hafmin haddii Dhuloos leeyihiin dhulkeenii Majeerteen ayaa soo galay ee ha naga baxeen ayaga maxay Garoowe u joogaan iyo dhul Majeerteen, mise Majeerteen ayaa dhul la’aan haysaa..?
Waa waxayga anaa leh, waxaagana kula lihi..
Mise horgaladii Iidoorka u shaqaynayey ayaa la soo diray oo ummada tashuush ku furaya…
Kontroll sidoo loo raraa aan dadka dhulka dega ogeyn….? Kuye Majeerteen Dhul boob u socda.
War dadkaan isma fahmayaane hala kala guro.
Xuduud la isku ogyahay oo lagu heshiiyey haloo sameeyo.. Hadday doonaan Iidoorka hasoo degsadaan markaas…yaab
Aniga waa iigu dambaysay Somaliada cidwalba xerada ooteen iyo meesha geela u daaqa waa tiqiin ama ariga u daaqo.
Ma kuugu dhaartaa in dhul Dhabayaca cid looga baqayn, weliba rag raba in noolaadan.
Nafti hure iyo isqarxin waa meesheeda.
Hawiye iyo Isaaq labadaba miyirkooda waa qabaan oo dhul Majeerteen in ku seexdaan oo buste dhigtaan kusoo talogelimayaan.
Nimankaan ilamadeeradayna cadowba uma aragno iyo in dhul kala leenahay.
Somali dhan ayaa Puntland imaan karta oo degen lakiin ayagu waaba awlul amar, macnaha dadka taliya.
Haddaad maqasho Majerteen Sool dhul ka raba waa tashuush meesha ka socdo ku wareeray.
Waxaan aaminsanahay Isaaq iyo kuwo u shaqeeya ayaa oran: Fiiriya Majeerteen oo xuduud Garoowe soo durkiyey oo in dhul idinka qabsado raba….kkkkkkkkk
Ayaga ma cidbaa Puntland ka xigta, maxaa hadii baabur Majeerteen Bixin lagu arko qayla keenay..kkkkkkk
Maxaad Tukaraq iiga xigsan anoo Garoowe kuu ogol…. Harti dhul ma wada laha ee xuduud noo kala ooda..deal
Dadbaa waxay ku doodan Puntland waa in ilaa Laascanood tagtaa.. Haddii Garoowe kasoo dhaqaaqaan oo Taleex iyo Bixin oo Garoowe u muuqata lagu arko qaylo isqabsan.
Puntland dhulka xaree iyo Bixin kontrool ma imaankartaan.. waan isqabsiin waayey.
Mideeda kale Dooxada Bixin ilaa Iskusbuban gaartaa oo lawada degaan maxaa Bixin cid keliya u sheegan, Bixin Boocame waa Sool laakiin haddii Puntland ciidan iyo Kontrool geysay maxaa ku jaban sow tii lahaa orda dhulka xoreeya ilaa Labadida Gaatama……Wax badan baa i gafay.
ATTENTION:ISKA JIR SOMALIYEY:
WAA MAXAY ISIS?
WAA MAXAY ALSHABAB?
WAA MAXAY ALQACIDA?
HADAAD MAQASHO MAGACYADAAS & KUWA LA MIDKA AH WAA KOOXO AY KU ADEEGTAAN (CIA,MI6,MOSSAD,SIS,iwm)WAXAYNA U SAMAYSTEEN IN DIINTA ISLAAMKA LAGU CEEBEEYO(TERRORSIM) & IN DUNIDA MUSLIMKA LAGUU BURBURIYO,WAX XAGJIR LADHAHAANA MA JIRO,.OK,KU QOR GOOGLE ama YOU TUBE:
KU QOR YOU TUBE OOFIIRSO.
ISRAEL DID 9/11.& IN SIDE JOB.
OSAMA BEN LADIN STILL ALIVE (BAHAMAS).
19 HIJACKERS STILL ALIVE & WELL!!.
DID MOSSAD DO CHARLIE HEBDO!!?.IN SIDE JOB.
DONALD TRUMP SAYS:OBAMA HE FOUNDED of ISIS,CO-FOUNDER HELLERY CLINTON.
SOMALIYEEY KA KAC MEESHA—-WAKE UP!!!.
Land of punt kkkkkkkkkkkkkkkkk sxb walaahi qosol kaad igadhamaysay walaahi nin ilbaxa ayaad tahay maxaad tidhi puntland dhulka maqan ha xorayso iyo bixin majeerteen MA imankaro isukay qaban wayday kkkkkk
Dhamaan waan idin salmy.Dhulkaan iyo dadkaan dawlada Puntland ayaa meel kala marineysa hadii besha dhulbahante dhulkas ledahay ileen xad ayeyba kala leeyhiin labada beelod xitaa dhulbahanta aya dhulka sikala leh e rerka halala hadlo hana loshego wax qanciya hadey tahay wax vasumada dan u ah wey ogalanayan lakiin dhul layska qaato nii ugaasyada fahaha halaga qaado Puntlanders saxan o aan horgale marna noqon kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Wanku salamy.Walee ana shskiga ader acmed ayaa mar hore igalay kkķkkkkkkkkkkkkkkk Isaaq ayad shegatay kama wadee waxuka wadaa nin Imaan ah mahid aka Abgaal kkkkkkkkk War ninyahow reerkasi wa erka somali ugu wadanisan adna waxad laso tacanthy hargeya hala aqoonsado kkkkkkkkkkkkkkkkk O ninyabow hadaa.maxa anaga xamar noogu dheganthy markan daladaha lashirno ama an melahas waxkaso dhacsano kkkkkkkkkkkkk Hargeysa malinta lafasaxo garoowa kuxigta been maha taasi kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Run ayaad sheegtay anigu miirkeyga waan qabaa, dhul Majeerten oo ka soo dagaalan waxey iila mid tahey SAXARAHA Liibiya iyo Niger aad oo ka soo dagaalan
Waaba godod abeeso lugta ku rido adigoo Biyo la’aan ah.
Dhilkaas hadduuba ahaan lahaa dhul Webiyo iyo beero leh – Argagax ayaaba idin dililahaa.
Ninbaa igu lahaa dadkaa loo ma saafurin jirey qarnigio tobnaad.
Mustafa daacad salaan eboow nin culus.
Waxaa iskakeey dhalay reer woqooyi iyo koofur. Guriga aan deganahay waxaa suran laba calan.
Sxb weligeey MA tageerin kala go.itaan somaliyeed. Laakiin waxaan ahay qof aaminsan in aan xoog wax lagu xalin karin.
Garqaad waa runtaa qofkastaa oo ibnu aadama waa jecel yahay midnimo iyo in lays urursado awood iyo dhaqaalaba oo waata anagoo Qaar idinka idinka mida calashaan reer koonfureeda oo aanan lahjadooda garanayn aanu
Lahjadooda aanan garanayn aanu caashaq nay walaal nimo iyo somalinimo nakeentay xataa lagaran waayay waxaanu usidno ee lanoogu abaal guday qaldaamiin markaa midnimo been iyo munafaqada dooni mayno
Midnimada afka baarkiisa ah daliil kale umabaahna koonfuri hamidowdo oo iyadoo is jecel oo waxay afka kashegayso iyadooy kamuuqdaan hala arko iyadiibaa Kala tagtay oo is aamini wayday maxaa aniga layshegayaa markaa
Qaldaamiin – means DADKII QALDAMEY ee shuruud la’aan yimid
– Gabar dhoocil ah ayaa idin dhaamto, ileen NIN RAACI MEYSO BILAA SHUTUUD iyo Balan.
* QALDAAN WAAYE QOWDHAN WAAYE QAXAR WAAYE QAXOOTI WAAYE Kkkk
Dee dad bilaa sharuud ah yaa qiimeyn waxaa la moodaa dad meelay joogan waayey oo DHULKOODII KA QAWAAFEY.
@ Barwaaqo ma ila socotaa u jeedada hadalkeyga
Bilaa shuruud hanagu soo laaban ina, bilaa heshiisna hanaga tagina.
Madama ay casimada fiday oo balaratay wa muhiim
In kantarolka la durkiyo dhankasta oo magalada u
Fido gofafka ku yaala waxaa ka faidaya dadka
Degan lakiin waa muhiim in wada tashi iyo wada
Jir lagu mareeyo isbalarinta GAROWE 10 sano ka
Hor ninkii goof ku lahaa dacalada GAROWE manta
Waa hantiile. Nabadaa naas la, nuugo leh
Hadalkaaga oo igafay ayaa arkay..
Turkaraq, Boocame 20 minutes, Boocame Garoowe Saacad…..kkkkkkkk.
Waxaa tiri: Garoowe seen u difaacin haddii Boocame Somaliland haysato u jirto hal saac….kkkkk
War sax maaha laakiin kaba soo qaad in u jirto Saacad.
Sxb Waa Dhul Harti Garoowe iyo Boocame, lafo abeeso hoos ka xiriiraan, nothing will happen.
Mid iga qor kollay inta aniga iyo adiga nool nahay maqli maysid Garoowe oo cadow ka xoog badan ka qaxaya oo weliba Somali ah.
Yaa wadkiisa soo doonan oo ku dhaca caasumadda Puntland.
Xoogaaga Ceeldheer, Ceelbuur iyo Xaradheere kaga xoreeya ciyaalka Eelayda waalan, kollay Xamar kugu halaysan maayee.
Waad iga qoslisiisay😄
Dabshid garbaad uledahay in aad sidaadoonto uturjumato imatinkii walaalnimo ee somaliland sababtoo ah mabagaranaysid waxa laguula yimid iyo dadka kuu imanayay hiigsigoodu iyo yoolkoodu wuxuu ahaa
Dabshid awalna anaa kuu imid hadana kaa tagay dhulkaygiina anaa haysta waase laga yaabaa inaad maalmo igadaba lulato Kuna seexo koonfuri way kudaysay ninkii noolna waa arki waxaa aan kushegayo